Ka qaadida kootada Google laga bilaabo Android iyada oon tirtirin xisaabta
Ma rabtaa Google in laga saaro Android aad? Waa kuwan waxa la sameeyo
Markaad ka saarto koontada Gmail ka qalabka Android habka saxda ah, nidaamku waa mid fudud oo aan xanuun lahayn. Koontada ayaa weli jirta, adiguna waxaad awood u heli kartaa inaad marin u isticmaasho barta shabakada internetka, xitaa waad soo celin kartaa marka dambe haddii aad bedesho maskaxdaada.
Markaad ka fekereyso inaad ka saarto koonto, waa muhiim inaad maskaxda ku hayso inta badan seddex fikradood oo kala duwan oo laga yaabo inay wareeraan:
Ka tiri akoontiga Google.
Joojinta isku-dhafka si aadan u arkin e-mailka soo galaya.
Ka qaadidda koontada Gmail telefoonka gaarka ah.
Waxaanu diiradda saareynaa sheyga ugu dambeeya (inkastoo aan ku tusineyno sida loo jajabiyo isku kalsoonida). Ka hor intaadan bilaabin, waxaa jira dhowr arrimood oo la tixgelinayo. Tan ugu muhiimsan, waxaad waayi doontaa helitaanka barnaamijyada iyo waxyaabaha aad ka soo iibsatay Google Play Store haddii aad ka saarto koontada Gmail ee ku xiran dukaanka. Waxaad sidoo kale waayi doontaa helitaanka emails, sawirada, jadwalka, iyo xog kasta oo kale oo ku xiran xisaabta Gmail.
Inkastoo ay suurtogal tahay in lagu daro xisaabta Gmail back on dambe, waxaad u maleyn kartaa inaad tixgelisid iskuday xulashada sinjiga . Doorashadan ayaa la taaban karo inta lagu jiro seddexda talaabo, haddii aad u malaynayso inaad rabto inaad ka baxdo koontada.
Xusuusin: Tilmaamaha hoos ku qoran waa in ay khuseeyaan arrin kasta oo samaysay telefoonkaaga Android: Samsung, Google, Huawei, Xiaomi, iwm.
Haddii aad runtii rabto inaad ka saarto Gmail taleefankaaga, talaabooyinka aasaasiga ah waa:
Ku Dhex Gaadh Jeeg > Xisaabaadka.
Ku dhufo Google kadibna ku dhufo xisaabta Gmail ee aad rabto inaad ka saarto.
Furo liistada buuxda, oo laga yaabo inay u egtahay saddex dhibcood ama seddex xariiq, dooro xisaabta .
Xaqiiji ka bixitaanka koontada.
Ku Dhex Gaadh Jeeg> Xisaabaadka
Markaad ka saarto koontada Gmail taleefanka, marwalba waxaad isticmaashaa liiska macaamiisha iyo ma aha Google menu.
Tallaabada ugu horreysa ee laga qaado koontada Gmail ee aad ku jirto Android waa inaad ka hesho liiska macaamiisha telefoonkaaga.
Iyadoo ku xiran qaabka Your Device Android, iyo version of Android in uu ku rakibay, waxaad yeelan kartaa halkii Caymiska & Sync menu, laakiin waa wax la mid ah isku mid.
Tan waxaa lagu gaari karaa iyada oo la furayo liiska appka ugu weyn, ku xirxirida Qalabka Qalabka , ka dibna xulashada Xisaabaadka ama Xisaabaadka & Iskuduwaha menu.
Muhiim: Inta lagu jiro tallaabadan, waxaad gabi ahaanba tahay inaad doorto Xisaabaadka ama Xisaabaadka & Isku-Bixinta halkii aad Google ka heli lahayd menu-ka ugu muhiimsan.
Haddii aad doorato Google-ka menu-ka ugu wanaagsan, waxaad ku dhammaysan kartaa xisaabinta Gmail-kaaga halkii aad uga saari laheyd telefoonka.
Xulo Lacagta Gmail ee Ka Hortagaysa Telefoonkaaga
Haddii aad leedahay xisaabaad badan oo Gmail ah, waxaad u baahan doontaa inaad doorato midka aad rabto inaad ka saarto liistada.
Iyadoo Macaamiishu ay furan yihiin, Android-ga ayaa ku soo bandhigi doona liis ay ku qoran yihiin barnaamijyo la rakibay oo xisaabiyey ku xidhnayd qalabkaaga.
Waxaad u baahnaan doontaa inaad ku dhajiso Google halkan, kaas oo soo saari doona liiska xisaabaha Gmail.
Markaad ku shubto xisaabta Gmail ee aad rabto in aad ka saarto telefoonka, waxay furi doontaa menu Sync ee xisaabtaas.
Iska Diiwaan Galinta Iskaa Tag ama Gebi Ah Ka Qayb Gmail
Waad diidi kartaa isku-dhafidda sida tallaabo ku-meel-gaar ah, laakiin ka-saarista xisaab Gmail ayaa gabi ahaanba gebi ahaanba iska geli doona helitaanka emailka, sawirrada, iyo xogta kale.
The Sync menu wuxuu ku siinayaa fursado badan oo la xiriira koontadaada Gmail.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka tagto Gmail ku xiran telefoonka, laakiin inaad joojiso helitaanka emails iyo ogaysiisyada, waxaad ku guuleysan kartaa tan adigoo si fudud u soo jeesanaya goobaha isku dhafan ee shakhsiga.
Haddii aad runtii rabto in aad gebi ahaanba ka saarto koontada Gmail taleefankaaga, waxaad u baahan doontaa inaad furto liiska mugga . Astaanta astaankani waxay u egtahay saddex dhibcood oo isku xigta. Qoraalkan waxaa ka mid ah ikhtiyaarka xisaabta , taas oo aad u baahan tahay inaad doorato.
Dhammaystirso Koontadaada Kootada Google Adabkaaga
Marka aad xaqiijiso ka saarista koontadaada, waa la tegi doonaa. Si kastaba ha noqotee, waad wici kartaa barta shabakadda webka ama dib dambe u xir.
Ka dib markaad ku xirto xulashada xisaabta furan, taleefankaagu wuxuu ku soo bandhigi doonaa caddaynta caddaynta.
Si loo dhameeyo ka bixitaanka koontadaada Gmail ee taleefankaaga, waxaad u baahan doontaa inaad ku xirto xisaabtaada .
Marka habsocodka la dhammeeyo, telefoonkaagu wuxuu ku soo laabanayaa liiska hore, iyo cinwaanka Gmail ee aad ka bixisay waxaa laga maqnaan doonaa liiska xisaabaadka Google ee ku xiran qalabkaaga.
Dhibaatooyinka Ka-saarista koontada Google Telefoonada Android
Inkastoo tilmaamadani ay u shaqeeyaan inta badan taleefannada Android, waxaad ku ordi kartaa mishiinka dhibaatooyin kala duwan. Kuwa ugu caansan ayaa ah marka aad qaadato saddexda tallaabo, ma arki kartid badhanka muraayada menu ee shaashaddaada.
Haddii aadan arkeynin mulkiilaha buuxa, oo u eg saddex dhibcood oo isku xigta, waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelatid inaad gasho. Eeg tusahaaga Android si aad u hesho boodh muuqaal ama muuqaal ah oo u eg saddex xariiq oo isku xigta.
Haddii aad leedahay batoon sidaan oo kale ah, riix markaad ku dhaqaaqdo saddexda tallaabo. Taasi waa inay furto liicitaanka maqalka, taas oo kuu ogolaan doonta inaad ka saarto xisaabtaada Gmail.
Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale dhibaato ka haysato inaad ka saarto koontada asaasiga ah ee Gmail kaaga. Tani waa xisaabta loo isticmaalay markii taleefanka horey loo sameeyay, waxaana lagu xiraa barnaamijyo badan, sida Google Play Store.
Haddii aadan awoodin inaad ka saarto koontadaada Gmail kaaga taleefankaaga, waxay ku caawin kartaa inaad marka hore ku darto xisaab Gmail cusub. Haddii taasi aysan shaqayn, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad sameyso dib u habeyn dibadeed . Tani waxay sidoo kale ka saari doontaa dhammaan macluumaadkaaga telefoonka, markaa hubi inaad wax walba soo celiso .
Sida Loo Isticmaalayo Your Smartphone Android / Tablet si aad TV
Sida loo Diiwaan geliyo Taleefanka Taleefoonkaaga casriga ah
Sida loo Isticmaalo Kumbuyuutarka Android
Raadinta taleefankaaga Android: Hordhac
Ciyaartoyda Muusikada ee Wanaagsan ee haysta Idaacad Internet ah
10ka Tilmaamood ee loogu talagalay Nabadgelyada Nabadgelyada Guriga
Sida Looga Dhigo Qodobka Kale Ee Codsiga Ereyga
No-Heshiiska AT & T PREPAID (horay loo yaqaan GoPhone) Fursadaha Qorshaha
Midabka Beedka Midabka
Isticmaalka Flash-Up Flash on Your DSLR
Maxay tahay Mac? Ma ka duwan tahay PC?
Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Khadka Facebook
CADPage App waxaa loogu talagalay dabdemiyeyaasha iyo Jawaabeyaasha ugu horeeya
Sida loo qoro Blog 5 Talaabo oo fudud
Muujinta Muuqaalka Excel
Baro si aad u aragto Sawirrada kuxirta isla markiiba Yahoo Mail Adkee Talaabooyinkan
Maqnaanshaha Naqshadda DSX Surround Sound
Fahmidda Cerulean iyo Sida Loo Shaqeeyey
8 Adeegyada Macluumaadka Qoraalka ah ee Bilaashka ah, Barnaamijyada
Sida Loo daabaco Email ee Yahoo Mail
New, Yar, PlayStation 2 in la sii daayo bisha November
Dib u eegista ShopSavvy App ee telefoonada Android by Big ee Japan
Sida loo Isticmaalo Khadka Ku Baaqsan ee Muuqaalka Maqnaanshaha - ama Iska Dhigi Doono